नेप्से परिसूचक ९ दशमलव ९१ अङ्कले वृद्धि
दिनभरीको व्यापारपछि परिसूचक ९ दशमलव ९१ अङ्कले बढेर १ हजार ५ सय ५४ दशमलव ५१ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । नेप्सेमा कारोबार रकम रू. १२ करोड ३६ लाखले बढेर रू. ७७ करोड १८ लाखमा झरेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको हो ।
नेप्से परिसूचक २४ दशमलव ६३ अङ्कले घट्यो
दिन भरीको व्यापारमा २४ दशमलव ६३ अङ्कले घटेर १ हजार ७ सय २४ दशमलव ४९ विन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेमा कारोबार रकम बढेर रू. ७६ करोड ३७ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १९ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ । जलविद्युत समूहको परिसूचक २ दशमलव शून्य ४ प्रतिशतले घटेको छ ।
नेप्सेमा १३ दशमलव शून्य ९ अङ्कको गिरावट
नेप्से परिसूचकमा शून्य दशमलव ७४ प्रतिशतले घटेको छ । नेप्से १३ दशमलव शून्य ९ अङ्कले घटेर १ हजार ७ सय ४९ दशमलव १२ विन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेमा कारोबार रकम बढेर रू. ६८ करोड ७४ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १९ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको छ ।
नेप्सेमा सामान्य सुधार, परिसूचक शून्य दशमलव १४ प्रतिशतले वृद्धि
दिनभरी उतार चमढावमा रहेको शेयर बजार अन्त्यमा शून्य दशमलव १४ प्रतिशतले बढेर बन्द भएको हो । विहीवार नेप्से २ दशमलव ५० अङ्कले बढेर १ हजार ७ सय ६२ दशमलव २१ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेमा कारोबार रकम घटेर रू. ५३ करोड ८५ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १९ खर्ब ५८ अर्ब पुगेको छ ।
नेप्से परिसूचक ६ दशमलव २५ अङ्कले बढ्यो
बिहीवार नप्से परिसूचक शून्य दशमलव ३६ प्रतिशतले बढेको छ । यस दिन नेप्से ६ दशमलव २५ अङ्कले बढेर १ हजार ७ सय ५९ दशमलव ७१ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेमा कारोबार रकम घटेर रू. ६९ करोड ६४ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १९ खर्ब ५३ अर्ब पुगेको छ ।
नेप्से परिसूचक २ दशमलव ४६ अङ्कले बढ्यो
बुधबार दिन नेप्से २ दशमलव ४६ अङ्कले बढेर १ हजार ७ सय ५३ दशमलव ४६ विन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेमा कारोबार रकम रू. २१ करोड घटेर रू. ७१ करोड ३२ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १९ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको छ । बीमा समूहको परिसूचक १ दशमलव १५ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेप्से परिसुचक १३ दशमलव ५० अङ्कले घट्यो
सोमवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ७६ प्रतिशतले घटेको छ । दिनभरीको व्यापारमा १३ दशमलव ५० अङ्कले घटेर १ हजार ७ सय ६८ दशमलव ८९ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । नेप्सेमा कारोबार रकम रू. ९२ करोड ८९ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १९ खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ ।
नेप्से परिसूचक ६ दशमलव ५८ अङ्कले वृद्धि
पहिला कारोबारदेखि न्यून अङ्कले घटबढ भइरहेको बजार दिन भरीको कारोबारमा ६ दशमलव ५८ अङ्कले बढेर १ हजार ७ सय ९४ दशमलव ४७ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । यस दिन परिसूचकसँगै शेयर कारोबारमा पनि सुधार देखिएको छ ।
नेप्से परिसूचक ४.८४ अङ्कले घट्यो
१ हजार ७ सय ९२ दशमलव ७३ विन्दुबाट खुलेको बजार शून्य दशमलव २७ प्रतिशत घटेर १ हजार ७ सय ८७ दशमलव ८९ विन्दुमा बन्द भएको छ । मङ्गलवार कारोबारमा आएका १ सय २१ कम्पनी मध्ये ३७ कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ, ६६ कम्पनीको घटेको छ भने बाँकी १८ कम्पनीको शेयरमूल्य स्थिर रहेको छ ।
नेप्से परिसूचक १८ दशमलव १ अङ्कले बढ्यो
मङ्गलवार शेयर बजार १ दशमलव शून्य २ प्रतिशतले बढेको छ । दिनभरिको कारोबारमा परिसूचक १८ दशमलव १ अङ्कले बढेर १ हजार ७ सय ९८ दशमलव ५० विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । नेप्सेमा कारोबार रकम रू. ३३ करोड बढेर रू. १ अर्ब १२ करोड पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १९ खर्ब ९२ अर्ब पुगेको छ ।
नेप्से परिसूचक १६ दशमलव ६२ अङ्कले बढ्यो
दिनभरिको कारोबारमा परिसूचक १६ दशमलव ६२ अङ्कले बढेर १ हजार ७ सय ८० दशमलव ४० विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । नेप्सेमा कारोबार रकम रू. ७ करोड ९० लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १९ खर्ब ७२ अर्ब पुगेको छ । बीमा समूहको परिसूचक १ दशमलव ५२ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, होटल र वित्त कम्पनीको १ दशमलव २१ प्रतिशत, बैङ्किङको १ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत....
नेप्सेमा सामान्य सुधार, परिसूचक ४ दशमलव २८ अङ्कले बढ्यो
यसदिनको काराबारमा नेप्से परिसूचक ४ दशमलव २८ अङ्कले बढेर १ हजार ७ सय ५३ दशमलव ३८ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । नेप्सेमा कारोबार रकम रू. ८ करोड १२ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १९ खर्ब ४० अर्ब पुगेको छ । बङ्किङ समूह र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ७८ प्रतिशत र होटलको शून्य दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेप्से परिसूचक ४ दसमलब ६२ अंकले घट्यो
दिनभरिको कारोबारमा बजार ४ दशमलव ६२ अङ्कले घटेर १ हजार ७ सय ४९ दशमलव १० विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । नेप्सेमा कारोबार रकम रू. ७ करोड ५३ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १९ खर्ब ३५ अर्ब पुगेको छ । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ४८ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, ‘अन्य’ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेप्से बजार पुनः ओरालो तर्फ
यस दिन बजार ३ दशमलव ३८ अङ्कले घटेर १ हजार ७ सय ५३ दशमलव ७२ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । अघिल्लो व्यापार दिनको तुलनामा यस दिन नेप्सेमा कारोबार रकम २९ दशमलव ६३ प्रतिशतले घटेर रू. ७ करोड ५७ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १९ खर्ब ४० अर्ब पुगेको हो । कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको हो ।
नेप्से बजार ३६ दशमलव २७ अङ्कले घट्यो
यस दिन नेप्से बजार ३६ दशमलव २७ अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक २ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले घटेर १ हजार ७ सय ३० दशमलव ६४ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । अघिल्लो व्यापार दिनको तुलनामा यस दिन नेप्सेमा कारोबार रकम १७ दशमलव २२ प्रतिशत (रू.५१ करोड) बढेर रू. १ अर्ब ५ करोड पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १९ खर्ब १२ अर्ब पुगेको हो ।
नेप्से परिसूचक ७ दशमलव ३७ अङ्कले घट्यो
बुधबार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ४१ प्रतिशतले घटेको छ । दिनभरीको कारोबारमा उतार चढावसँगै घटेको बजार १ हजार ७ सय ७९ दशमलव १३ विन्दुमा पुगेको हो । यस दिन परिसूचक र कारोबार घटेपनि कारोबार भएको शेयर कित्ता भने ३७ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो व्यापार दिनको तुलनामा यस दिन नेप्सेमा कारोबार रकम रू. ३९ करोड घटेर रू. ९४ करोड ९६ लाख पुगेको छ
नेप्से परिसूचक १७ दशमलव ९८ अङ्कले घट्यो
मङ्गलबार नेप्से परिसूचक १ प्रतिशतले घटेको छ । दिन भरीको कारोबारमा परिसूचक १७ दशमलव ९८ अङ्कले घटेर १ हजार ७ सय ८६ दशमलव ५० विन्दुमा पुगेको थियो । नेप्सेमा कारोबार रकम रू.१ अर्ब ११ करोड घटेर रू. १ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १९ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको हो ।
साताको पहिलो दिन नेप्सेमा दोहोरो अंकको गिरावट
आइतवार शेयर बजार परिसूचक नेप्से १० दशमलव ६९ अङ्क घटेको छ । सो दिन म्यानुअल कारोबार सहित २ अर्ब ४६ करोड कारोबार भएको छ । म्यानुअल कारोबारमात्र १ अर्ब १९ करोड रहेको छ । नागरिक लगानी कोषको म्यानुअल सहित १ अर्ब २० करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल बैङ्कले आफ्नो स्वामित्वमा भएको कोषको शेयर बिक्री गरेको हुनाले म्यानुअल कारोबार बढेको हो ।
नेप्से परिसूचक ३ दशमलव ५२ अङ्कले घट्यो
बुधबार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव १९ प्रतिशतले घटेको छ । बजार खुलेको पहिलो आधा घण्टासम्म बढेको नेप्से त्यसपछिको व्यापार भने ओरालो लाग्न थालेको थियो दिनभरिको कारोबारमा परिसूचक ३ दशमलव ५२ अङ्कले घटेर १ हजार ८ सय १५ दशमलव १७ विन्दुमा पुगेको थियो । यस दिन परिसूचकमा कमी आएपनि कारोबार रकम भने न्यून प्रतिशतले बढेको थियो ।
नेप्से परिसूचक ९ दसमलब ९७ अंकले घट्यो
बुधबार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ५४ प्रतिशतले घटेको छ । यस व्यापार दिनमा बजार ९ दशमलव ९७ अङ्कले घटेर १ हजार ८ सय २४ दशमलव ८३ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । नेप्सेमा कारोबार रकम रू. १६ करोडले घटेर रू. १ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण बढेर रू. २० खर्ब १२ अर्ब पुगेको हो । वीमा समूहको परिसूचक १ दशमलव शून्य ७ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेप्से परिसूचक ९ दशमलव ३७ अङ्कले वृद्धि
बुधबार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ५२ प्रतिशतले बढेको छ । यस व्यापार दिनमा बजार ९ दशमलव ३७ अङ्कले बढेर १ हजार ७ सय ९७ दशमलव ४५ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । नेप्सेमा कारोबार रकम १३ प्रतिशतले घटेर रू. १ अर्ब २५ करोड पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण बढेर रू. १९ खर्ब ८१ अर्ब पुगेको हो ।
नेप्से बजार २१ दशमलव ५४ अङ्कले वृद्धि
मङ्गलबार नेप्से परिसूचक १ दशमलव २२ प्रतिशतले बढेको छ । यस व्यापार दिनमा बजार २१ दशमलव ५४ अङ्कले बढेर १ हजार ७ सय ८८ दशमलव शून्य ८ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । जलविद्युत् समूहको परिसुचक ३ दशमलव ७७ प्रतिशतले बढेको छ । कारोबारमा आएका सबै जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढेपछि यस समूहको परिसुचक ९० दशमलव ७१ अङ्कले बढेको हो ।
नेप्से बजार ४८ दशमलव ७६ अङ्कले वृद्धि
निरन्तर ओरालो लागि रहेको नेप्से बजार आज भने उल्लखनिय अंकले वृद्धि भएको छ। आजको नेप्से परिसूचक २ दशमलव ९० प्रतिशतले बढेको छ । यस व्यापार दिनमा बजार ४८ दशमलव ७६ अङ्कले बढेर १ हजार ७ सय ३० दशमलव ६२ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । नेप्सेमा कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिन १६ प्रतिशतले बढेर रू. १ अर्ब २ करोड पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १९ खर्ब ७ अर्ब पुगेको हो ।
सम्हालिदै नेप्से बजार, परिसूचक १ दशमलव २६ अङ्कले घट्यो
निकै नै उतारचदाब देखिएको आजको नेप्से बजार शून्य दशमलव शून्य ७ प्रतिशतले घटेको छ । यस व्यापार दिनमा बजार १ दशमलव २६ अङ्कले घटेर १ हजार ६ सय ८१ दशमलव ८६ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । यस दिन नेप्सेमा रू. ८८ करोड १९ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १८ खर्ब ५३ अर्ब पुगेको हो । यस दिन वित्त कम्पनी, वीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन र ‘अन्य’ समूहको परिसुचक घटेपछि
नेप्से बजार १२ दशमलव ६३ अङ्कले घट्यो
साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ७३ प्रतिशतले घटेको छ । यस व्यापार दिनमा बजार १२ दशमलव ६३ अङ्कले घटेर १ हजार ७ सय २२ दशमलव ४३ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । यस दिन नेप्सेमा रू. ६८ करोड ७७ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १८ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको हो । यो कारोबार रकम अघिल्लो व्यापार दिनको रकम भन्दा रू. ३१ करोड २९ लाख कम हो ।
नेप्से बजार ३९ दशमलव १२ अङ्कले घट्यो
सोमबार नेप्से परिसूचक २ दशमलव २६ प्रतिशतले घटेको छ । यस व्यापार दिनमा बजार ३९ दशमलव १२ अङ्कले घटेर १ हजार ६ सय ९४ दशमलव ८१ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । सोमबार नेप्सेमा रू. १ अर्ब १९ करोड पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण २ दशमलव २६ प्रतिशतले घटेर रू. १८ खर्ब ६८ अर्ब पुगेको हो । यस दिन पनि कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक घटेको छ ।
साताको पहिलो दिन नेप्से ४० दशमलव ९४ अङ्कले घट्यो
आइतबार नेप्से परिसूचक ३ दशमलव ३१ प्रतिशतले घटेको छ । यस व्यापार दिनमा बजार ४० दशमलव ९४ अङ्कले घटेर १ हजार ७ सय ३३ दशमलव ९३ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । आइतबार कारोबार रकम रू. १७ करोडले घटेर नेप्सेमा रू. १ अर्ब १४ करोड पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण २ दशमलव ३० प्रतिशतले घटेर रू. १९ खर्ब ११ अर्ब पुगेको हो ।
नेप्से परिसूचक ४ दशमलव ७० अङ्कले घटेको
यस व्यापार दिनमा बजार शून्य दशमलव २६ प्रतिशतले घटेर १ हजार ७ सय ७४ दशमलव ८७ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिन कारोबार रकम ३५ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् रू. ७१ करोड ४६ लाखले घटेर नेप्सेमा रू. १ अर्ब ३१ करोडको शेयर कारोबार भएको छ । कुल बजार पूँजीकरण भने रू. १९ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको हो ।
बजार सन्तुलित; १९ दशमलव १५ अङ्कले नेप्से परिसूचक वृद्धि
बुधबार नेप्से परिसूचक १९ दशमलव १५ अङ्कले बढेको छ । यस व्यापार दिनमा बजार १ दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले बढेर १ हजार ७ सय ७९ दशमलव ५७ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । नेप्सेमा रू. २ अर्ब २ करोडको शेयर कारोबार भएको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १९ खर्ब ६१ अर्ब पुगेको हो ।
छानविन समिति खारेज गरेपछि नेप्सेमा सुधार; बजार ८४.५१ अङ्कले बृद्धि
मङ्गलबार नेप्सेमा लगातार तीन पटक सर्किट ब्रेक लाग्यो । सोमबार धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ती शुद्धिकरण गर्ने व्यवस्था खारेज गरेको विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । सोहि प्रभावले यस दिन नेप्सेमा ५ प्रतिशतको वृद्धि भएको ब्रोकरहरुको भनाई छ । पहिलो सर्किट ब्रेक खुल्ना साथ फेरि अर्को सर्किट ब्रेक लागेको नेप्सेमा १ घण्टा ११ मिनेटमा पुनः सर्किट ब्रेक लागेको हो ।